Homeनेपाली यौन कथामेरो पहिलो सेक्स अनुभब | First sex experience Nepali Sex Story
मेरो पहिलो सेक्स अनुभब...त्यस बेला म १८ बर्षको थिए, कलेज पढन पहाडबाट मधेश झरेको, हट्टाकट्टा जवान थिए, डेरा बस्न थाले पल्लो कोठामा पनि म सँगै पढने साथी र उनकोमुमा र बहिनी बस्थे ।
चिन्जान पछी अलिक घनिश्टता बढन थाल्यो । बुबा काठमाडौं तिर जागिरे थिए । त्यसले गर्दा कहिले काही चाडपर्वमा आउनु हुन्थियो । यसरी नै साथीको परिवार सँग हिमचिम बढनु थाल्यो ।
यसरी नै दिन बित्न थाल्यो ।एक दिन अचानक साथीको बाबाले उनलाई काठमाडौं बोलाउनु भयो उनको बाबाले काठमाडौंमा हाकिमलाई भनेर जागिर मिलाउनु भएछ । त्यसैले पढदै जागिर खान, उ आमा बहिनीलाई छाडेर काठमाडौं तिर लाग्यो । अब बिहान बेलुकी पढने साथी पनि छुट्यो, मलाई एक्लोपन महसुस भयो ।
उनको बहिनी अनु पनि कक्षा ८ मा पढथिन । त्यसैले बिहान् बेलुकी नजनेको कुरा सिकाउने जिम्मा मेरो धमा आयो । म कसरी नकर्न सक्थे।अनु एक त स्कुले र उनको आमासँग दोकान भएकोले प्राय बिहान बेलुकी मात्रा भेट हुन्थियो । अनु पनि बिहान बेलुका सिकाइ दिनु भन्दै मेरो कोठामा आउथिन । म न जानेको कुराहरु सिकाइ दिन्थिए । अनी कहिले काही जिस्काइ दिन्थे । शायद पहिला किन मेरो नजर पुगेन ? शायद मेरो गिद्दे दृष्टिल नपरेकोहुन सक्छ ।
उनी पनि तरुनी भै सकेकी थिइन । कालो वर्णकी, मोती झै दात मिलेको, काटेको कपाल हाँस्दाखल्टो पर्ने गाला, पुष्ट छाती उमेरको अनुपातमा अलिक ठुला थिए उनका अनार दानाहरु …. अब मेरो मनले उनलाई
कु बिचारले हेर्न थाले छ । हरपल उनको प्रतिक्षा हुन थाल्यो मेरो मनमा छटपट्टी बढन थाल्यो । उनी सँग हरपल साथ रहन चाहन्थे । शनीवारको दिन थियो पानी अली अली परी रहेको थियो । त्योदिन घरमा हामी
दुई प्राणी मात्रा थियौ । आन्टी पनि दोकान जानु भएको थियो । एक्लो मौका पाएर म पनि उनको कोठामा पुगे तर उनी त्यहा थिइन ।
अनी न भेटे पछी पिशाब फेर्न सौचालय तिर लागे उनी त बाथरुममा पो नुहाउदै गीत गुनगुनाउदै रहिछिन । सौचालय र बाथरुम को एउटै भित्ता भएकोले गर्दा दुलोदालीबाट नुहएको देखिन्छ कि भनेर दुलो खोज्न थाले
दुलो कही थिएन । सौचालयबाट निस्केर ढोकामा छ की दुलो भनेर खोज्न थाले एउटा भेटाए । त्यहीबाटै चिहाउने बिचार गरे र त्यहा बाट चिहाउन मात्राके खोजेको थिए ढोका खुल्यो । उनी माथि लड्न पुगे । के गर्नु भएको भन्दै अनु चिचाइन म लाजले रातोपिरो भए मेरो वाक्य फुटेन । उनले आफुलाई टावेलले मात्रा
बेरेकी रहिछिन त्यसैले उनको टावेल खुस्के छ, अनु निर्ब्रस्त्र भइन र हतार हत्तार आफ्नो गुप्ताङ हातले छोप्न थालिन ।
अनु लाजले रातोपिरो भएकी थिन । त्यहा मौनता छायो । आफुलाई सम्हाल्दै म उठे । म कोठा तिर लागे र
अनु कता लागि थाहा भएन । कोठामा पुग्दा मेरो शरीरमा करेन्ट लागेको थियो, अलिकती पनि पश्चताप थिएन । सम्झन थाले त्यो पल उनको निर्वस्त्र शरीर पुष्ट छाती अनी गुप्ताङमा अली अली पलाएको रौ अनी उनको स्पर्श अनी उनको शरीरबाट निस्केको मदहोस वासना मेरो काम इच्छालाई जगाइ रहेको थियो । यो मेरो पहिलो अनुभब थियो त्यसैले म मख्ख थिए । यसो मेरो लिङ छामेको त लिङले पानी फाली सकेको रहेछ केही अगाडि मेरो फुलिएको लिङ, तिग्रालाई सिरानी हालेर सुती सकेको थियो । म शिथिल भै सकेको थिए । म पनि अनुको गुप्ताङमा छिराउन पाए कस्तो हुन्थियो, भन्ने कल्पना गर्दै खाटमा ढल्के ।
अनु बेलुकी पनि मेरो नजिक परिन । पढन पनि आइन, मलाई देख्ने बितिकै भाग्न थालि देखे पनि लजाएर सिर निहुराउ थिन । यसरी नै केही दिन बित्यो । एक दिन अचानक प्रकट भइन मेरो कोठामा अंक गणित सिकाइ दिनु भन्दै, म पनि सिकाइ दिनु पर्यो भनेर सिकाउनु थाले । तर मेरो आँखा अनुको दुध तिरै थियो । म उनीबाट निस्किएको वासनामा हराउन थाले, झसँग भए दाई खै सिकएको त ? न निदाइ नै सपना देखन थालेछु । सायद अनुले पनि अनुभब गरिन होला मेरो ब्यथा म पनि पुन सिकाइ दिने निहु गर्दै मेरोघुडाले उनको दुधमा स्पर्श गर्न थाले । उनी पनि थाहा नपाए झै गरी रहिन । मेरो तनमन आन्दोलित हुँदै गयो, उनी रातोपिरो हुँदै गइन ।
यो नै शायद उनको मौन स्विक्रिती थियो या मेरो सोच ? यो म यकिन गरेर भन्न् सक्दिन । म उनलाई बिस्तारी सुम्सुम्याउन थाले । उनले आँखा बन्द गरी सकेकी थिन मझन आतुर भए मेरो ओठ उनको पिपलपाते ओठमा लगेर चुम्न थाले उनी पनि त्यसै गर्न थालिन यती बेला सम्मउनी मेरो बाहुपासमा कसिएकी थिन म लिन थिए उनलाई उत्कर्शमा पुर्याीउन उनी पनि मेरो अनुसरण गर्दै थिइन । मैले बिस्तारै
बिस्तारै उनको दुध सर्ट बाहिरैबाट माडन थाले । त्यती बेला सम्म उनको फर्क फर्केर रातो पेन्टी देखिदै थियो अब मेरो हाथ उनको त्यो कोमल तिघ्रामा सल्बलाउन थाल्यो । उनको गुप्तान्ङको सुगन्ध आइरहेको थियो । म झन लठ् हुँदै थिए ।
उनको योनि छाम्नलाई मेरो हात उनको पेन्टी भित्र छिराए, उनको योनी रसाएको थियो । रौ अली अली भएको महसुस गरे अनी मेरो औंला उनको गुप्तान्ङ भित्र बाहिर गर्न थाल्यो, उनी शिथिल हुँदै मेरो काखमा लडिन । मेरो लिङ तेसै त ९० डिग्रीमा खडा भएको थियो । शायद मेरो लिङले उनलाई बिझाए छ अनी उनले पनि बाहिरबाटै लिङ सुम्सुम्एउन थालिन । तर उनको अनुहार पढदा लाग्थियो उनी मेरो लिङ उनको योनीमा पसाउन आतुर थिइन बिस्तारी बिस्तारी उनको सटको बटनहरु खोल्न थाले, उनको मुहार अझ मदहोस् देखिन्थियो ।
गुलाबी ब्रालगाएकी रहिछन उनको दुध त्यस्मा उम्कौला झै गरेर कसिएको थियो सुम्सुम्यौदै त्यसलाई पनि
खोली दिए गुलबी दुधका मुन्टा म तिरनै घोचौला झै ठाडो थियो । अब यवम रितले उन्को फर्क पेन्टी सबै फुकाले ।अब उनी मेरो सामु निर्शत्र भइन उनको लजालु मुहार अनी झुकेको शिर मलाई असधैं मन पर्योउ अनी उनको योनीमा मेरो लिङ पसाउन आतुर थिए ।
म पनि फटाफट लुगा खोल्न थाले उनी टोलाएर हेरदै थिइन शायद मेरोलिङ्को आँकार देखेर झस्किन मैले के भयो भनेर सोधे ? तपाईंको त कत्रो ठुलो रहेछ हतियार भनेर झस्केको नि पुन मैले सोधे के तिमीले अरु सँग पनि यौन सम्बन्ध राखेको छौ छैन भेनेर शिर हल्लाइन पुन मैले सोधे अनी कसरी थाहा पएउत मेरो ठुलो छ भनेर उनले मेरो जवाफ दिन तर मेरो जिद्दीको अगाडि उनको केही लागेन दाईको सुत्दा देखेको मात्र हो । अब
म उनी माथि खप्टिए र बिस्तारि लिङ उनको योनीको मुखमा लगेर छिराए तर मेरो लिङको टुप्पो मात्र छिर्यो उनी कराउन थालि अह्ह मरेनी अह्ह अह्ह अह्ह अह्ह अह्ह मैले लिङ निकल्नै पर्योा ।
अनी मैले मेरो लिङ मा थुक लगाए र पुन उनको योनिमा लगेर रखे चुम्न थाले उनको पिपल पाते ओठ यसो गदा उन म जोस आए छ अनी भन्न् थालि बिस्तारि छिराउनुन अनी मैले बिस्तारि बिस्तारि गर्दै मेरो लिङ लाई जोडले ढक्का दिए उनी डल्लो परिन मरेनी मेरे अह्ह अह्ह अह्ह दुख्यो भयो भन्न् थालि म कहाँ छडनेवाल थिए अझ जोड जोडले धक्का दिन थाले । शायद उनको पनि पिडा कम भए छ क्यर उनी पनि मुनी बाट साथ
दिन थालि । यस्तै ४ -५ मिनेट पछी मेरो लिङ बाट पानी निस्कियो । मेरो ठेलाई कम हुँदै गयो । म उनी माथिनै खप्टिएर उनलाई किस गर्दै उनको दुधको मुन्टो खेलाउन थाले ।
म जान्छु भन्दै मलाई उनले खाटमा झारी उनी आत्ती खुन भन्दै यसो हेरेको त मेरो लिङको वरीपरी खुन लागेको रहेछ । झट्ट मेरो आँखा उनको योनिमा पुग्यो त्यहा पनि खुनको टाटोहरु थियो । उनी लुगा सम्हाल्दै लागिन ढोका बहिर तर हिडाइ अलिक फरक थियो ।
What do you think of this मेरो पहिलो सेक्स अनुभब | First sex experience Nepali Sex Story ?
First sex experience malai sex nepali sex stori Nepali Sex Stories in Nepali Nepali Sex Story sex चिकेको कथा नेपाली यौन कथा
Techy April 28, 2020 at 7:21 AM
Nice first time sex yestai hunx I liked this first time sex stories keep posting other Nepali sex Kahani.
sex stories April 28, 2020 at 9:32 AM
good to get ur feedback i will be also posting nepali real sex story visit nepalisexstory.xyz. Thanks